လက်စွမ်း ပြခဲ့တဲ့ ဆီလက်ဆန် ၊ ဂြိုဟ်မွှေခဲ့တဲ့ ဘာကလေ ၊ အိမ်ကွင်း နိုင်ပွဲ ပျောက်နေဆဲ လမ်းပတ် ( Chelsea0– 1 Valencia Review )
ယနေ့ မနက် က ကစား သွားခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု H ရဲ့ ပွဲစဉ် တပွဲ ဖြစ်တဲ့ ချယ်လ်ဆီး – ဗလင်စီယာ ပွဲစဉ် ကတော့ ဧည့်သည် ဗလင်စီယာ အသင်း တိုက်စစ်မှူး ရိုဒရီဂို ရဲ့ တလုံးတည်းသော သွင်းဂိုး နဲ့ အိမ်ရှင် ချယ်လ်ဆီး အသင်း ကို ချန်ပီယံလိဂ် အဖွင့် အိပ်မက်ဆိုး တွေ ပေးလိုက်ပါတယ် ။
Valencia’s Spanish forward Rodrigo Moreno celebrates after scoring during the UEFA Champion’s League Group H football match between Chelsea and Valencia at Stamford Bridge in London on September 17, 2019. (Photo by DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)
ဗလင်စီယာ အသင်း ဟာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း နဲ့ မကစားမီ အသင်း အတွင်း မငြိမ်သက်မှု များ ဖြစ်ပေါ် ထားပြီး အထိုင်ကျ နေတဲ့ နည်းပြ မာဆယ်လီနို ကို ထုတ်ပယ်ပြီး လူငယ် နည်းပြ တဦး ဖြစ်တဲ့ အယ်ဘာတို ဆီလာဒက်စ် နဲ့ အစားထိုး ထားပါတယ် ။ ၄င်းရဲ့ ဗလင်စီယာ နည်းပြ အဖွင့်ပွဲ ဟာလည်း ဘာစီလိုနာ ကို ၅ – ၂ နဲ့ အရေးနိမ့် ခဲ့တာကြောင့် ဝုလ်ဗ် နဲ့ ပွဲမှာ ပုံစံကောင်း ရခဲ့တဲ့ ချယ်လ်ဆီး အသင်း က ဒီပွဲမှာ အသာစီးပဲ လို့ ပရိသတ် တွေ အတော်များများ က ယူဆ ထားခဲ့ကြပါတယ် ။
သို့ပေမယ့် တကယ့် ပွဲချိန် အတွင်း မှာတော့ ဗလင်စီယာ အသင်း ဟာ သူတို့ရဲ့ စည်းလုံးမှု ကို ထုတ်ဖော် ပြသ သွားခဲ့ပြီး အိမ်ရှင် ချယ်လ်ဆီး အသင်း ကို ခံစစ် ကျစ်လျစ်မှု ရှိရှိ နဲ့ ခုခံ သွားခဲ့သလို လျင်မြန်မှု ရှိတဲ့ တန်ပြန် တိုက်စစ် နဲ့ အတူ မိနစ် တချို့ မှာ ချယ်လ်ဆီး အပေါ် ထိရောက်တဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှု တွေ ပြုလုပ် ပြနိုင် ခဲ့ပါတယ် ။
အိမ်ရှင် ချယ်လ်ဆီး အသင်း နဲ့ ဖရန့် လမ်းပတ် အတွက်ကတော့ ဒီရာသီ ပထမဆုံး အိမ်ကွင်း နိုင်ပွဲ အတွက် မျှော်လင့်ချက် ကြီးမားစွာ နဲ့ ကြိုးစား ကစား ခဲ့ပေမယ့် ပြိုင်ဖက် ဂိုးသမား ဆီလက်ဆန် လက်စွမ်း ပြနေခဲ့သလို ၊ ကံတရား ရဲ့ ဖေးမမှု ၊ VAR ရဲ့ မျက်နှာသာ ပေးမှု နဲ့ အတူ ပင်နယ်တီ တလုံး လက်ဆောင် ရခဲ့ပေမယ့် လူစားဝင် ကွင်းလယ်လူ ဘာကလေ က ဖြုန်းတီး ပစ်ခဲ့လို့ အိမ်ကွင်း နိုင်ပွဲ နဲ့ ဆက်လက် ဝေးနေရပါတယ် ။
Valencia’s Dutch goalkeeper Jasper Cillessen celebrates after winning the UEFA Champion’s League Group H football match between Chelsea and Valencia at Stamford Bridge in London on September 17, 2019. (Photo by DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)
တပွဲလုံး မှာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း နဲ့ ဗလင်စီယာ အသင်း တို့ဟာ သူတို့ သုံးနေကြ အားသန်မှု ရှိတဲ့ နည်းစနစ် တွေကိုသာ ထုတ်သုံး သွားခဲ့ပေမယ့် လူငယ် ကစားသမား တွေနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် အတွေ့အကြုံ နည်းတဲ့ ကစားသမား တွေ ရှိနေခဲ့တာကြောင့် ဒီ အချက် ကလည်း ယနေ့ မနက်က ရှုံးပွဲ မှာ အဓိက အခရာ ကျသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ဗလင်စီယာ ဂိုးသမား ဆီလက်ဆန် ဟာလည်း အလွန်ဆို ရဲ့ ဖရီးကစ် ကန်သွင်းမှု ၂ကြိမ် ကို လက်စွမ်းပြ ကာကွယ် သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
တပွဲလုံး ကန်ချက် အကြိမ် ၂၀ ကျော်ခဲ့ပေမယ့် ထိရောက်တဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှု က အနည်းငယ် သာ ရှိခဲ့လို့ ချယ်လ်ဆီး တို့ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု က လွန်မြောက်ဖို့ အတွက် လာမယ့် ပွဲစဉ် တွေမှာ ဆက်လက် ရုန်းကန် ရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပထမပိုင်း မှာတော့ ၂သင်း စလုံး ဟာ တယောက် အမှား တယောက် စောင့်ကြည့် ကစားခဲ့တာကို တွေ့ခဲ့ရပြီး အိမ်ရှင် ချယ်လ်ဆီး ကလည်း တိုက်စစ် အလွန်အကျွံ မဖွင့်ခဲ့သလို ၊ ဗလင်စီယာ အသင်း ကလည်း တော်ရုံတန်ရုံ ပဲ ကစားခဲ့ပါတယ် ။
ကိုကွီလင် ရဲ့ ဖျက်ထုတ်ပုံ ကြမ်းတမ်းမှု ကနေ တဆင့် ဒဏ်ရာ ရသွားတဲ့ မေဆင်မောင့် ကြောင့် ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်း အတော်လေး အားနည်း သွားရသလို ၊ လူစားဝင် လာတဲ့ ပတ်ဒရို ဟာလည်း အသင်းဖော် တွေနဲ့ အချိတ်အဆက် မိအောင် ကစား နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့တာ ကို တွေ့ခဲ့ ရပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ပတ်ဒရို ဟာ ဒုတိယပိုင်း မှာ အပိုင် ကန်သွင်းခွင့် တကြိမ် ၊ ၂ကြိမ်လောက် ရခဲ့ပေမယ့် အဆုံးမသတ် နိုင်ခဲ့ပါဘူး ။
Chelsea’s Spanish midfielder Pedro (L) vies with Valencia’s French midfielder Francis Coquelin during the UEFA Champion’s League Group H football match between Chelsea and Valencia at Stamford Bridge in London on September 17, 2019. (Photo by Ian KINGTON / AFP)
အဓိက ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ ရှုံးပွဲမှာ ဗီလိန် ဖြစ်သွားတာက ရော့စ် ဘာကလေ လို့ ဆိုရမှာပါ ။ ကံကောင်း ထောက်မစွာ ရလာတဲ့ ပင်နယ်တီ ကို အဆုံးမသတ် နိုင်ခဲ့တဲ့ အပြင် ဘာတခု မှ ကြိုးကြိုးစားစား ဆော့ပြတာမျိုးလည်း မရှိခဲ့ပါဘူး ။ ပုံမှန်ဆိုရင် ဂျော်ဂျင်ဟို ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ ကတည်းက ဟာဇတ် ပြီးရင် ပင်နယ်တီ ကန်ခွင့် ရတဲ့သူ ဖြစ်ပေမယ့် ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ ထူးခြားစွာပဲ ဘာကလေ က ပင်နယ်တီ ကန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Chelsea’s English midfielder Ross Barkley hitsapenalty over the bar during the UEFA Champion’s League Group H football match between Chelsea and Valencia at Stamford Bridge in London on September 17, 2019. (Photo by Ian KINGTON / AFP)
ဂိုးပေးလိုက်ရတာကလည်း အခုထိ ပုံမကျသေးတဲ့ ခံစစ် နေရာယူမှု နဲ့ Set-piece အမှားတွေကြောင့်လို့ ယူဆ ရမှာ ဖြစ်သလို ၊ ပါရီဟို ရဲ့ ပေးပို့မှု ကောင်းမွန် ခဲ့တဲ့ အပြင် ရိုဒရီဂို ရဲ့ ပါးနပ်မှု တွေကြောင့် ထိုက်ထိုက်တန်တန် အနိုင် ရသွားတယ် လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ လမ်းပတ် ရဲ့ နည်းစနစ် မှာ ချယ်လ်ဆီး ပရိသတ် တွေ အတော်များများ ဘဝင် မကျမိတာက မေဆင်မောင့် ဒဏ်ရာ ရနေတုန်း ဘာကြောင့် ပူလီဆစ် ကို အသုံးမပြု ခဲ့တာလဲ ဆိုတဲ့ တချက်ပါ ။
ပတ်ဒရို ဟာ ချန်ပီယံလိဂ် အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်သူ ဖြစ်ပေမယ့် ခြေစွမ်း က တပွဲရွှေ ၊ တပွဲငွေ ဖြစ်နေတာကြောင့် မြန်ဆန်မှု နဲ့ လှည့်စားမှု တချို့ ကို လုပ်ဆောင် နိုင်မယ့် ပူလီဆစ် ဟာ ချယ်လ်ဆီး တိုက်စစ် အတွက် အနည်းဆုံး သွင်းဂိုး တဂိုး ရအောင်တော့ ကြိုးစား ပေးမယ့် လူငယ်လေး ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ လမ်းပတ် အတွက် ကတော့ အိမ်ကွင်း နိုင်ပွဲပါ ရှာမရဖြစ်ခဲ့တဲ့ အပြင် အားထားရတဲ့ မေဆင်မောင့် ပါ ဒဏ်ရာ ရသွားလို့ မိအေး ၂ခါနာ ရပြီ ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ရင်း … ။
လကျစှမျး ပွခဲ့တဲ့ ဆီလကျဆနျ ၊ ဂွိုဟျမှခေဲ့တဲ့ ဘာကလေ ၊ အိမျကှငျး နိုငျပှဲ ပြောကျနဆေဲ လမျးပတျ ( Chelsea0– 1 Valencia Review )
ယနေ့ မနကျ က ကစား သှားခဲ့တဲ့ ခနျြပီယံလိဂျ အုပျစု H ရဲ့ ပှဲစဉျ တပှဲ ဖွဈတဲ့ ခယျြလျဆီး – ဗလငျစီယာ ပှဲစဉျ ကတော့ ဧညျ့သညျ ဗလငျစီယာ အသငျး တိုကျစဈမှူး ရိုဒရီဂို ရဲ့ တလုံးတညျးသော သှငျးဂိုး နဲ့ အိမျရှငျ ခယျြလျဆီး အသငျး ကို ခနျြပီယံလိဂျ အဖှငျ့ အိပျမကျဆိုး တှေ ပေးလိုကျပါတယျ ။
ဗလငျစီယာ အသငျး ဟာ ခယျြလျဆီး အသငျး နဲ့ မကစားမီ အသငျး အတှငျး မငွိမျသကျမှု မြား ဖွဈပျေါ ထားပွီး အထိုငျကြ နတေဲ့ နညျးပွ မာဆယျလီနို ကို ထုတျပယျပွီး လူငယျ နညျးပွ တဦး ဖွဈတဲ့ အယျဘာတို ဆီလာဒကျဈ နဲ့ အစားထိုး ထားပါတယျ ။ ၄ငျးရဲ့ ဗလငျစီယာ နညျးပွ အဖှငျ့ပှဲ ဟာလညျး ဘာစီလိုနာ ကို ၅ – ၂ နဲ့ အရေးနိမျ့ ခဲ့တာကွောငျ့ ဝုလျဗျ နဲ့ ပှဲမှာ ပုံစံကောငျး ရခဲ့တဲ့ ခယျြလျဆီး အသငျး က ဒီပှဲမှာ အသာစီးပဲ လို့ ပရိသတျ တှေ အတျောမြားမြား က ယူဆ ထားခဲ့ကွပါတယျ ။
သို့ပမေယျ့ တကယျ့ ပှဲခြိနျ အတှငျး မှာတော့ ဗလငျစီယာ အသငျး ဟာ သူတို့ရဲ့ စညျးလုံးမှု ကို ထုတျဖျော ပွသ သှားခဲ့ပွီး အိမျရှငျ ခယျြလျဆီး အသငျး ကို ခံစဈ ကဈြလဈြမှု ရှိရှိ နဲ့ ခုခံ သှားခဲ့သလို လငျြမွနျမှု ရှိတဲ့ တနျပွနျ တိုကျစဈ နဲ့ အတူ မိနဈ တခြို့ မှာ ခယျြလျဆီး အပျေါ ထိရောကျတဲ့ ခွိမျးခွောကျမှု တှေ ပွုလုပျ ပွနိုငျ ခဲ့ပါတယျ ။
အိမျရှငျ ခယျြလျဆီး အသငျး နဲ့ ဖရနျ့ လမျးပတျ အတှကျကတော့ ဒီရာသီ ပထမဆုံး အိမျကှငျး နိုငျပှဲ အတှကျ မြှျောလငျ့ခကျြ ကွီးမားစှာ နဲ့ ကွိုးစား ကစား ခဲ့ပမေယျ့ ပွိုငျဖကျ ဂိုးသမား ဆီလကျဆနျ လကျစှမျး ပွနခေဲ့သလို ၊ ကံတရား ရဲ့ ဖေးမမှု ၊ VAR ရဲ့ မကျြနှာသာ ပေးမှု နဲ့ အတူ ပငျနယျတီ တလုံး လကျဆောငျ ရခဲ့ပမေယျ့ လူစားဝငျ ကှငျးလယျလူ ဘာကလေ က ဖွုနျးတီး ပဈခဲ့လို့ အိမျကှငျး နိုငျပှဲ နဲ့ ဆကျလကျ ဝေးနရေပါတယျ ။
တပှဲလုံး မှာ ခယျြလျဆီး အသငျး နဲ့ ဗလငျစီယာ အသငျး တို့ဟာ သူတို့ သုံးနကွေ အားသနျမှု ရှိတဲ့ နညျးစနဈ တှကေိုသာ ထုတျသုံး သှားခဲ့ပမေယျ့ လူငယျ ကစားသမား တှနေဲ့ ခနျြပီယံလိဂျ အတှအေ့ကွုံ နညျးတဲ့ ကစားသမား တှေ ရှိနခေဲ့တာကွောငျ့ ဒီ အခကျြ ကလညျး ယနေ့ မနကျက ရှုံးပှဲ မှာ အဓိက အခရာ ကသြှားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ ဗလငျစီယာ ဂိုးသမား ဆီလကျဆနျ ဟာလညျး အလှနျဆို ရဲ့ ဖရီးကဈ ကနျသှငျးမှု ၂ကွိမျ ကို လကျစှမျးပွ ကာကှယျ သှားနိုငျခဲ့ပါတယျ ။
တပှဲလုံး ကနျခကျြ အကွိမျ ၂၀ ကြျောခဲ့ပမေယျ့ ထိရောကျတဲ့ ခွိမျးခွောကျမှု က အနညျးငယျ သာ ရှိခဲ့လို့ ခယျြလျဆီး တို့ ခနျြပီယံလိဂျ အုပျစု က လှနျမွောကျဖို့ အတှကျ လာမယျ့ ပှဲစဉျ တှမှော ဆကျလကျ ရုနျးကနျ ရဦးမှာ ဖွဈပါတယျ ။ ပထမပိုငျး မှာတော့ ၂သငျး စလုံး ဟာ တယောကျ အမှား တယောကျ စောငျ့ကွညျ့ ကစားခဲ့တာကို တှခေဲ့ရပွီး အိမျရှငျ ခယျြလျဆီး ကလညျး တိုကျစဈ အလှနျအကြှံ မဖှငျ့ခဲ့သလို ၊ ဗလငျစီယာ အသငျး ကလညျး တျောရုံတနျရုံ ပဲ ကစားခဲ့ပါတယျ ။
ကိုကှီလငျ ရဲ့ ဖကျြထုတျပုံ ကွမျးတမျးမှု ကနေ တဆငျ့ ဒဏျရာ ရသှားတဲ့ မဆေငျမောငျ့ ကွောငျ့ ခယျြလျဆီး အသငျး ရဲ့ တိုကျစဈပိုငျး အတျောလေး အားနညျး သှားရသလို ၊ လူစားဝငျ လာတဲ့ ပတျဒရို ဟာလညျး အသငျးဖျော တှနေဲ့ အခြိတျအဆကျ မိအောငျ ကစား နိုငျခဲ့ခွငျး မရှိခဲ့တာ ကို တှခေဲ့ ရပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ ပတျဒရို ဟာ ဒုတိယပိုငျး မှာ အပိုငျ ကနျသှငျးခှငျ့ တကွိမျ ၊ ၂ကွိမျလောကျ ရခဲ့ပမေယျ့ အဆုံးမသတျ နိုငျခဲ့ပါဘူး ။
အဓိက ခယျြလျဆီး အသငျး ရဲ့ ရှုံးပှဲမှာ ဗီလိနျ ဖွဈသှားတာက ရော့ဈ ဘာကလေ လို့ ဆိုရမှာပါ ။ ကံကောငျး ထောကျမစှာ ရလာတဲ့ ပငျနယျတီ ကို အဆုံးမသတျ နိုငျခဲ့တဲ့ အပွငျ ဘာတခု မှ ကွိုးကွိုးစားစား ဆော့ပွတာမြိုးလညျး မရှိခဲ့ပါဘူး ။ ပုံမှနျဆိုရငျ ဂြျောဂငျြဟို ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီ ကတညျးက ဟာဇတျ ပွီးရငျ ပငျနယျတီ ကနျခှငျ့ ရတဲ့သူ ဖွဈပမေယျ့ ဒီနပှေဲ့မှာတော့ ထူးခွားစှာပဲ ဘာကလေ က ပငျနယျတီ ကနျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။
ဂိုးပေးလိုကျရတာကလညျး အခုထိ ပုံမကသြေးတဲ့ ခံစဈ နရောယူမှု နဲ့ Set-piece အမှားတှကွေောငျ့လို့ ယူဆ ရမှာ ဖွဈသလို ၊ ပါရီဟို ရဲ့ ပေးပို့မှု ကောငျးမှနျ ခဲ့တဲ့ အပွငျ ရိုဒရီဂို ရဲ့ ပါးနပျမှု တှကွေောငျ့ ထိုကျထိုကျတနျတနျ အနိုငျ ရသှားတယျ လို့ ဆိုရမှာ ဖွဈပါတယျ ။ လမျးပတျ ရဲ့ နညျးစနဈ မှာ ခယျြလျဆီး ပရိသတျ တှေ အတျောမြားမြား ဘဝငျ မကမြိတာက မဆေငျမောငျ့ ဒဏျရာ ရနတေုနျး ဘာကွောငျ့ ပူလီဆဈ ကို အသုံးမပွု ခဲ့တာလဲ ဆိုတဲ့ တခကျြပါ ။
ပတျဒရို ဟာ ခနျြပီယံလိဂျ အတှအေ့ကွုံ ရငျ့ကကျြသူ ဖွဈပမေယျ့ ခွစှေမျး က တပှဲရှေ ၊ တပှဲငှေ ဖွဈနတောကွောငျ့ မွနျဆနျမှု နဲ့ လှညျ့စားမှု တခြို့ ကို လုပျဆောငျ နိုငျမယျ့ ပူလီဆဈ ဟာ ခယျြလျဆီး တိုကျစဈ အတှကျ အနညျးဆုံး သှငျးဂိုး တဂိုး ရအောငျတော့ ကွိုးစား ပေးမယျ့ လူငယျလေး ဖွဈပါတယျ ။ ဘယျလိုပဲ ဖွဈဖွဈ ၊ လမျးပတျ အတှကျ ကတော့ အိမျကှငျး နိုငျပှဲပါ ရှာမရဖွဈခဲ့တဲ့ အပွငျ အားထားရတဲ့ မဆေငျမောငျ့ ပါ ဒဏျရာ ရသှားလို့ မိအေး ၂ခါနာ ရပွီ ဖွဈကွောငျး သုံးသပျရငျး … ။